अघोर बाबाकी श्रीमतीले नै मलाई न्याय दिनुपर्छ, अर्कालाई रुवाएर आफु हास्न पाउछ ? (भिडियो हेर्नुस) — SuchanaKendra.Com
अघोर बाबाकी श्रीमतीले नै मलाई न्याय दिनुपर्छ, अर्कालाई रुवाएर आफु हास्न पाउछ ? (भिडियो हेर्नुस)
उजुरी दिए लगतै उनले पत्रकार सम्मेलन गरि आफुले न्याय पाउनु पर्ने र शारदाले आफ्नो बिबाह दर्ता गरी दिनु पर्ने समेत माग राखेकी छिन । आफुलाई शारदा पाण्डेले फसाएको भन्दै धरधरी रुदै मिडियामा आएकी छिन । बाकी भिडियोमा हेर्नुस